Akwụla ụgwọ maka Duplicates Ozi Niile | Martech Zone
Otutu n’ime unu mara na m sitere na mail ozigbo. Ọ bụ ezie na ozi ziri ezi egosila na ọ dị oke ọnụ karịa na mbubata mbubata ma e jiri ya tụnyere ahịa n'ịntanetị, ọ ka bụ ọwa nwere ike. Anyị na-ahụ ụfọdụ ọnụọgụ ọnụọgụ dị mma na ụlọ ọrụ B2B - nke gbapụla ozi izizi. Ozi ndị ahịa metụtara ndị ahịa ka bụ nnukwu ụlọ ọrụ, ọ bụ ezie.
Taa, anatara m ibe atọ ndị a n'otu igbe ozi m zigara n'otu adreesị ahụ. Ọ bụ a mara mma apịaji ngwugwu na-ọma mere site folks na Victoria Nzuzo. Akara ndị ntorobịa, Pink, na-ewu ewu n'etiti ụmụ agbọghọ na nwa m nwanyị nọ na ndepụta nzipu ozi ha. O di nwute na Victoria Secret, n'agbanyeghị, usoro ihe omume ha na-ezighi ezi na deduping mkpọsa ahụ. Anyị natara 3 iberibe na otu adreesị. Abụọ na-agwa okwu dị iche iche nke aha nwa m nwanyị na otu na-agwa m… Amaghị m ihe kpatara ya.
Nke a bụ mmejọ dị oke ọnụ. The nchekwa data eji maka ndị a mkpọsa nwere ike mfe na-agba ọsọ site software nke ga-hụ na ibe e zigara naanị otu onye na adreesị. Na mgbakwunye, enwere ike jikọta ya na data okike iji kpochapụ m kpamkpam site na nzipu ozi.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ mkpọsa ozi na-aga n'ihu, buru n'uche na ọ bụ uru kachasị mma maka ụfọdụ ụlọ ọrụ iji mee ka mpịakọta ahụ elu. O di nwute, nke ahụ na-eme ka nloghachi gị na ntinye ego na ọnụọgụ nzaghachi na-arụ ọrụ. Ihe nwere ike ịbụ nnukwu mkpọsa ebe a nwere ike kọọrọ dịka nke anaghị arụ ọrụ nke ọma. Gbaa mbọ hụ na e depụtaghachiri ebe nchekwa data gị tupu izipu ma jụọ ndị ọrụ gị ka ọ bụrụ na ha dị njikere ịkwụghachi ụdị mbipụta abụọ ọ bụla ma ọ bụ iberibe a laghachiri.
Tags: itinyeozi ederedepinknzuzo nke Victoriia
Jun 25, 2013 na 11:42 AM
Nke a nwere ike bụrụ ihe dị oke ọnụ ahịa maka ndị na-ere ahịa ahụ - ha na-ezipụ Kupọns maka ngwaahịa n'efu na mail. Kama ịnọrọ naanị otu, dị ka o kwesịrị ịbụ, nwa gị nwanyị nwere ike ịnakọta ihe atọ n'efu maka mmejọ ha. Ọ dị mma maka ya - ihe ọjọọ maka akara ala ha. (Kwụsị n'amaghị ama mana aka ekpe.)